Fahasalamana - Bezzia | Bezzia (Pejy 4)
Fanafody hifehy ny tebiteby sy ny hozatra
Lazainay aminao ny tetika sy fanafody tsotra sasany hampihenana ny tebiteby sy ny hozatra izay misy ankehitriny noho ny fomba fiainana mampiady saina.
Ampidiro ny kolesterola avo lenta - mandraisa ny hetsika tsara indrindra!
Rehefa hitantsika fa manana kolesterola avo isika dia mila mandray ny fepetra farany tsara, noho izany, nangoninay ny fepetra rehetra ilainao.
Ny fanazaran-tena mahomby indrindra hampihenana lanja
Te hihena ve ianao? Eny, ankoatry ny sakafo tsara dia tsy maintsy atambatrao amin'ny fanazaran-tena tsara indrindra hampiasana ny vatanao manontolo.
Masturbation hanatsarana ny vatana sy ny saina
Ny fanentanana dia fomba fanao mety hananana fifandraisana tsara amin'ny tena, ho fanampin'izay hahazoana tombony ara-batana sy ara-tsaina maro.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fanaintainan'ny vavony matetika
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao misoroka ny fanaintainan'ny vavony amin'ny fihetsika tsotra, hankafizanao fiainana salama kokoa.
Ireo antony mampiroborobo ny fanahiana, ny adin-tsaina ary ny fahaketrahana
Ny famoizam-po dia misy fiatraikany mivantana amin'ny toetrantsika, tena zava-dehibe ny hahafantarana izay anton-javatra misy fiantraikany indrindra amintsika, noho izany, holazainay aminao momba azy ireo izao!
Ny asidra amine an'ny fahasambarana, tryptophan
Tianay ny milaza aminao bebe kokoa momba ny tryptophan, asidra amine tena ilaina izay manampy anay hitazona fihetsika tsara sy angovo tsara isan'andro.
Fanatanjahan-tena hanamafisana ny lohalika
Ny fanamafisana ny lohalika dia zavatra lehibe kokoa noho ny ilaina amin'ny andavan'andro. Noho izany, tsy misy toy ny fanazaran-tena amin'ny andiana fanazaran-tena ao an-trano.
Inona no dikan'ny hoe manana PSA avo? Momba ny antigène prostaty manokana, holazainay aminao
Ny PSA avo dia afaka mamaritra zavatra maro, anisan'ny fahita indrindra ny fanovana ny sela amin'ny prostaty na amin'ny tranga hafa voan'ny homamiadana.
Legioma 5 mitondra tombony lehibe ho anao
Miresaka karazana legioma dimy manome tombony lehibe amin'ny vatana isika, toy ny sakafo feno otrikaina.
Esquisandra, ny fananany dia tsy hitsahatra hahagaga anao
Schisandra dia zavamaniry iray izay ampiasaina amin'ny fitsaboana voajanahary ny adin-tsaina, ny tsy fahitan-tory ary ny fahaketrahana, tonga lafatra amin'ny fahasalamantsika.
Mianara momba ny sakafo serotoninina, mety hampitraka ny fanahinao
Lazainay anao ny lakilen'ny sakafo serotonine, andiana sakafo izay hahasoa anao tsy amin'ny fahasalamana ihany, fa amin'ny toetranao ihany koa.
Ampidiro ao anaty menio isan-kerinandro ny epinara
Ny epinara dia tonga lafatra amin'ny fampitomboana ny herintsika, mitazona ny fontsika ho salama sy matanjaka ary koa ny tsinay sy ny vatantsika amin'ny ankapobeny.
Ny tombony amin'ny fahanginana ho an'ny fiadananao isan'andro
Betsaka ny tombony azo amin'ny fahanginana tsy maintsy fantatsika. Satria ny fialana amin'ny tabataba rehetra, indraindray dia manampy antsika hahatsapa ho tsara kokoa
Sakafo manampy anao hiala sasatra sy hiady amin'ny adin-tsaina
Lazainay aminao hoe inona ny sakafo manampy anao hiala sasatra ary hisoroka ny adin-tsaina, olana iray izay tena misy ankehitriny ary misy fiatraikany amin'ny olona maro.
Sakafo karsinogenika, angano rehetra
Androany, be dia be ny fampahalalana momba ny sakafo izay matetika mivadika vaovao diso. Tsy tena fantatsika hoe inona izany ...
Tantano ireo adin-tsaina amin'ireo zavamaniry mahasitrana ireo
Raiso an-tsoratra hoe iza no zavamaniry fanafody tsara indrindra hitsaboana ny fizotran'ny adin-tsaina, ny tebiteby ary ny tsy fahitan-tory. Izy ireo dia voajanahary ary afaka manampy anao.
Ireto ny infusions laxative ilainao
Rehefa manana kibo na mijaly noho ny fitohanana isika, ny iray amin'ireo fepetra voajanahary sy tena mandaitra azontsika raisina dia ny fanaovana infusions laxative.
Inona ny cryolipolysis
Raha manontany tena ianao hoe inona ilay cryolipolysis, dia homenay anao ny valiny tsara indrindra ary koa ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ity fitsaboana ity.
Mandriaka aorian'ny firaisana? Lazainay aminao ny antony
Raha efa nandeha rà ianao aorian'ny fanaovana firaisana dia aza mikoropaka fa matetika dia nandeha rà izahay. Na izany aza, zava-dehibe ny hitazomana ny toe-draharaha.
Sakafo tsara hanoherana ny tsy fahitan-tory!
Lazainay aminao hoe iza no sakafo tsara indrindra hiadiana amin'ny tsy fahitan-tory, miaraka amin'ireo akora izay afaka manampy antsika hatory.
Sakafo manankarena manezioma manampy anao hihena
Ireto sakafo lazainay aminao ireto dia manan-karena amin'ny maneziôma, otrikaina tonga lafatra hahasoa antsika ary hanampy antsika ho salama kokoa.
Ahoana ny fomba hisorohana ny marika mihinjitra rehefa manary lanja
Tsy mora ny misoroka ny marika mihinjitra rehefa mihena ny lanja. Androany dia manolotra andiana dingana maromaro ho anao izahay hankafizanao valiny lehibe.
Tokony hihinana ny zava-drehetra ve ianao?
Lazainay aminao raha tsara ny mihinana ny zava-drehetra na afaka miaina amin'ny sakafo voafetra toy ny vegan na ny vegetarian isan'andro.
Sakafo hisorohana ny osteoporose
Lazainay aminao hoe iza no sakafo mety indrindra hisorohana ny osteoporose ary iza amin'ireo no tokony hialana mba hahazoana sakafo mahasalama.
Ny maha-zava-dehibe ny sakafo mahavelona hisorohana ny mony
Ny fihinanana sakafo sy ny mony dia mety misy ifandraisany mivantana, satria matetika ny sakafo no mifehy ny kalitaon'ny vatantsika.
Tombony avy amin'ny salady letisia
Ny dite salady dia manana tombony lehibe izay hahagaga anao. Te hahita azy ireo hampihatra azy ireo ve ianao?
Voasary matsiro amin'ity fararano ity! Jereo izy ireo
Ny horohoron-tany amin'ny fararano dia safidy tsara ihany koa hikarakarana ny vatantsika amin'ny fotoana itiavantsika ny lanilanintsika.
Ahoana ny fomba hisorohana ny havizanana isan'andro
Lazainay aminao ny fomba azo atao mba hialana amin'ny havizanana isan'andro amin'ny toro-hevitra sy torolalana izay ahazoana angovo bebe kokoa.
Ny infusions tsara indrindra haka aina
Te hahafantatra ireo infusions tsara indrindra hialana sasatra voajanahary ve ianao? Safidy iray amin'ireo fanafody lehibe an-tananay.
Ny zavatra tokony ho fantatrao hisorohana ny STD
Azonao atao koa ny misoroka ny STD raha manaraka ny torohevitra omenay anao izahay. Fantaro ny olana rehetra mety hiteraka sy miloka amin'ny fahasalamana.
Voankazo sy legioma fararano
Atorinay anao ny fananana sy ny tombontsoa azo avy amin'ny voankazo sy legioma fararano, sakafo tena mahasalama ho an'ny sakafo isan'andro.
Torohevitra hitazomana ny fahasalamana ara-tsaina
Ny fitazonana ny fahasalamana ara-tsaina tsara dia ilaina amin'ny fiainana salama. Hahatanteraka izany isika amin'ny alàlan'ny fampahafantarana fanovana vitsivitsy amin'izany.
Izahay dia mamoaka ny angano siramamy!
Lazainay aminao ny angano momba ny siramamy, sakafo hatrizay izy io izay niteraka resabe, fantaro izay angano ireo.
Ireo sakafo ireo dia hanampy ny fandevonan-kanina
Halaviro ny fijaliana amin'ny fandevonan-kanina mavesatra isaky ny misakafo ianao dia manome anao toro-hevitra tsara indrindra hahatratrarana ny fandevonan-kanina tsy ilaina amin'ny fomba tsara indrindra.
Vahaolana amin'ny tenda
Lazainay anao hoe inona ny fanafody tsara indrindra azo sorohina sy sitrana amin'ny tenda, izay matetika no miseho mandritra io vanim-potoana io.
Mercury amin'ny trondro, mampidi-doza inona izany?
Hita amin'ny trondro maro ny merkiora, indrindra fa ny trondro manga lehibe. Mercury dia tsy mahasoa noho izany antony izany, holazainay aminao bebe kokoa.
Resipeo hanararaotana voatavo iray manontolo
Ianaro ireo fomba fahandro tsotra sy matsiro samihafa hanararaotana ny voatavo iray manontolo. Amin'ity fararano ity dia tsy hanana fialan-tsiny hankafizanao azy ianao.
Ireto no sakafo tokony hovidinao amin'ny fararano
Tonga ny fararano, fotoana mety indrindra hihinananaana ireo sakafo ara-potoana tsara indrindra, tena mahasalama izy ireo ary manampy antsika hitazona fahasalamana.
Ny fianarana misaintsaina dia afaka manova ny fiainantsika, noho ireo tombony rehetra omeny antsika. Izany no antony anehoanay anao ny dingana voalohany tokony hataonao.
Fanazaran-tena fototra hanitarana ny lamosinao
Ny manenjana ny lamosinao dia iray amin'ireo dingana lehibe tokony harahina. Te hahafantatra izay fanazaran-tena mety ve ianao mba hanamaivanana ny fanaintainana amin'ity faritra ity?
Ny tsy fitovizan'ny yaourt tsotra sy ny yaourt grika
Tianay holazaina aminao ny fahasamihafan'ireo karazana yaourt roa. Yaorta voajanahary sy yaorta grika, safidy roa matsiro.
Fanafody hialana amin'ny sery
Lazainay aminao hoe inona ny fanafody tsara indrindra hisorohana ny hatsiaka, satria olana iray misy fiantraikany betsaka amintsika io vanim-potoana io.
Ahoana raha manana proteinina ao amin'ny urine aho? Lazainay aminao
Rehefa omen'izy ireo anay ny valin'ny fanadihadiana dia mety ho somary mitebiteby kely isika ary kely kokoa raha somary kely ...
Fanazaran-tena hampihenana ny maso sy ny fahitana
Te hahafantatra ny fomba ahafahanao miala sasatra ny masonao sy ny masonao ve ianao? Ankehitriny ianao dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny fanazaran-tena tsotra isan'andro.
Ny fanafody ao an-trano hamelona ny orona sosotra aorian'ny hatsiaka na allergy
Raiso an-tsoratra ireo torohevitra ao aminay mba hisorohana ny orona sosotra tsy hanimba ny andronao, mianatra ny hikarakara azy io ary hanatsara ny fahasalamanao.
Sakafo mitazona ny hoditrao ho tanora
Sakafo mahasalama izay mitazona ny hoditra ho tanora noho ny otrikaina sy ny tombony omeny antsika amin'ny sakafo voalanjalanja.
Ireo sakafo ireo dia hanampy anao hanasitrana ny ratra rehetra
Tianay holazaina aminao hoe iza no sakafo mety tsara indrindra ho an'ny vatanao hanasitranana ratra amin'ny fomba tsara indrindra. Makà!
Fifadian-kanina tsindraindray hahavery ireo kilao fanampiny
Ny fifadian-kanina miserana tsy tapaka dia fombafomba hafa raha ny resaka fisakafoanana mba hahavery lanja na famoahana kilao maromaro.
Ny fototry ny aretina Crohn
Hilaza aminao izahay ny antony sy ny soritr'aretina mahazatra indrindra mba hahitanao amin'ny fotoana mety na voan'ny Crohn ianao na tsia.
Ny fananan'ny kamut
Lazainay aminao ny atao hoe kamut, serealy taloha izay manana tombony lehibe sy fananana hitazomana ny fahasalamantsika.
Mangetaheta be, oviana isika no tokony taitra?
Ny mangetaheta be dia mety fahita na angamba manondro olana ara-pahasalamana. Te hahita ny antony sy ny fotoana hanatonana dokotera ve ianao?
Tsara ve ny voankazo amin'ny alina mba hahavery ny lanja?
Ny voankazo dia iray amin'ireo sakafo mahasalama indrindra izay hitantsika ao an-dakozianay, mety hitondra izany na aiza na aiza ...
Samy hafa ny vatana rehetra ary samy manana ny tanjony isika amin'izany. Amin'ity indray mitoraka ity dia tianay holazaina aminao hoe inona izany ...
Kefir fananana sy tombontsoa
Lazainay aminao hoe inona avy ireo fananana sy tombontsoa azo avy amin'ny sakafo kefir, izay mety indrindra amin'ny fivalanan'ny tsinay sy hanatsarana ny fahasalamantsika.
Menaka turmerika, ny fitafiana mikarakara ny atiny anao Ianaro ny fomba fanomanana azy!
Turmeric dia sakafo manohitra ny inflammatoire matsiro sy matsiro, ianaro ny fomba fanomanana menaka turmerika izay hanampy anao hanana fahasalamana tsara.
Anti-inflammatories voajanahary, safidy mahasolo ny fanafody
Lazainay aminao hoe iza avy ireo anti-inflammatories voajanahary izay tokony hoheverinao hanatsarana ny fahasalamanao, safidy tsara hikarakarana ny tenanao.
Fahazarana misakafo mahasalama
Te hanaraka fahazarana misakafo mahasalama ve ianao? Ho hitanao fa tsy sarotra izany ary hamela anao tombontsoa marobe izay ho tianao.
Sakafo manankarena iode, inona ny iode?
Iode dia misy amin'ny sakafo maro, saingy azo antoka fa tsy afaka mieritreritra zavatra hafa izay tsy masira ianao ...
Tombony sy fatiantoka ny vary volontany
Ny vary mena dia tonga lafatra hanatsarana ny fahasalamanao, holazainay aminao hoe inona avy ireo tombony tsara indrindra ary inona ireo lesoka tokony hodinihina.
Lazainay aminao ny tombontsoa sy ny fananan'ny tongolo, sakafo be mpampiasa amin'ny sakafo ary tsara ho an'ny fahasalamana izany.
Tongan'ny atleta: Fantaro ireo soritr'aretina ary ianaro ny fomba hitondrana azy
Inona no tongotry ny atleta ary inona no fitsaboana mahomby indrindra? Fantaro ny fomba hitsaboana an'io aretina io sy ny fanafody tsara indrindra hanasitranana azy tsara
Ireo sakafo ireo dia hanampy anao hihena
Raha mitady hanery ny sakafonao ianao ary hanary kilao vitsivitsy amin'ny fomba mahasalama sy mahomby, aza misalasala ...
Mbola tsy fantatra hoe inona ilay edamame? Ho tianao ity tsakitsaky salama vaovao ity
Edamame dia nandresy palata maro be, mandrosoa ary hahalala bebe kokoa momba ity tsakitsaky mahasalama ity ary ampidiro ao an-dakozanao. Tsy hanenina ianao!
Makà voanjo hanatsara ny fahasalamanao
Lazainay aminao hoe iza amin'ireo voanjo tsara indrindra azo ampiana amin'ny sakafo hikarakarana ny fahasalamana isan'andro miaraka amin'ny otrikaina.
Fahazarana sy sakafo mampihetsi-po izay miteraka fanahiana
Sakafo na fahazarana manaitaitra andian-dahatsoratra no mitarika antsika hahatsapa ho mitaintaina kokoa, ary mety hiteraka fanahiana.
Ahoana ny fomba famongorana ny rano amin'ny fomba mahomby sy ara-pahasalamana
Ny fitazonana ny tsiranoka dia mety ho olana iray mampiahiahy ny olona maro, toe-javatra iray ateraky ny ...
Menaka mineraly, inona izany ary inona no ilana azy?
Tianay holazaina aminao kely ny momba ny menaka mineraly, vokatra fanta-daza sy be mpampiasa ary vitsy ny olona mahalala hoe inona izany.
Sombin-tarehy, ahoana ny fomba hampihenana azy ireo
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao misoroka na manintona ireo teboka izay miseho matetika amin'ny tarehy rehefa mandeha ny fotoana ary manimba ny feo.
Inona no atao hoe sakafo proteinina ary inona no sakafo ananan'izy ireo
Ny fihinanana proteinina dia mety amin'ny fomba maro, tsy maintsy manana proteinina 25% farafaharatsiny izy ireo amin'ny fihinanana isan'andro. Lazainay aminao ny mampiavaka azy.
Gallstones, ny fomba fisorohana sy fitsaboana azy ireo voajanahary
Mety hanana fanaintainana tena mahasalama ny fananana vatokam-bato, mianatra mamantatra azy io ary manatsara ny fahasalamanao amin'ny fitsaboana voajanahary ataonay.
Torohevitra amin'ny fisafidianana safidy sakafo haingana mahasalama
Ao anaty sakafo haingana dia azontsika atao ny mampiditra andiana toro-hevitra foana mba ho salama kokoa io ary afaka mankafy azy isika tsy misy kaloria be dia be.
Inona no atao hoe lecithin soja ary ahoana no fomba handraisana azy
Lazainay aminao hoe inona no misy an'io sakafo io, ny lecithin soja dia afaka manampy anao hanatsara ny fahasalamanao, raha mbola fantatrao ny fomba handraisana azy. Hilaza aminao izahay.
Lazainay aminao hoe inona avy ireo tombony sy fananan'ny voaloboka, sakafo tsy ampy rano izay manome otrikaina antsika.
Sakafo be fibre
Ilaina tokoa ny fibre, mila mihinana azy isan'andro isika mba ho salama sy hanana tanjaka be. Lazainay aminao hoe iza no sakafo tsara indrindra.
Soritr'aretina tsy fahampian-tsakafo
Ny soritr'aretina tsy fahampian-tsakafo dia azo jerena ambonin'ny ankizy sy ny be antitra. Fambara famantarana izay afaka maneno ny fanairana.
Ireo no karazana otitis
Ny aretin-tsofina na otitis dia mety miteraka soritr'aretina manahirana maro anao, mianatra mamantatra azy ireo, mba hanavahana ireo karazana otitis sy ny fomba hitsaboana azy.
Fomba ahazoana lovia mahasalama
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao mahazo lovia mahasalama isan'andro isan'andro, amin'ny fanovana kely vitsivitsy fotsiny amin'ny sakafonao.
Menaka tsara indrindra hanamaivanana ny fanindron'ny tantely
Lazainay aminao ny menaka tena ilaina ilainao hisorohana ny fanindron'ny tantely tsy ho matotra sy misy fiatraikany amin'ny hoditra.
Ny tombotsoan'ny rano oatmeal, fantatrao ve izy ireo?
Ny tombontsoa azo avy amin'ny rano oatmeal dia betsaka. Ka tsy maintsy ampifangarointsika amin'ny andavanandrontsika isan'andro izany, ahafahantsika manao azy io haingana sy ao an-trano.
Ny vy dia tonga lafatra ho an'ny vatana, tsy maintsy fantarintsika hoe iza avy ireo sakafo manome antsika vy betsaka indrindra mba hahasalama antsika hatrany.
Solony voajanahary hitsaboana marihitra
Mitondrà fitsaboana voajanahary voajanahary amin'ny fanafody an-trano roa, tadidio fa ny fihenjanana dia tsy mijery fotsiny fa tsy maharary.
Fananana sy tombony azo avy amin'ny kale na kale
Lazainay aminao hoe inona avy ireo tombony na fananan'ny kale na kale, izay lasa sakafo faran'izay lehibe.
Fomba fanasana quinoa sy tombony amin'ny fananany
Ny fanasana quinoa dia iray amin'ireo dingana fototra tsy maintsy raisintsika alohan'ny fihinanana azy. Izahay dia manambara ny fomba tokony hanaovanao izany hamenoana ny tenanao amin'ny fananany.
Manala ny aretin'andoha amin'ny fahavaratra
Tena mahazatra ny mijaly aretin'andoha amin'ny fahavaratra, zava-dehibe ny fahalalana izay antony sy soritr'aretina rehefa marary aretin'andoha isika.
Ireo no tombony azo amin'ny fihomehezana
Ny fihomehezana dia rafitra iray tokony hilazan'ny olombelona fahasambarana. Mahatalanjona ny tombony azony, tanterahina ny fitsaboana ary manatsara ny fahasalamantsika.
Resipeo mediteraneanina 3 izay hanampy anao hihena
Ny sakafo Mediterane dia mety amin'ny fikolokoloana ny vatantsika sy hanatsarana ny fahasalamantsika, noho izany, milaza aminao ny fomba fahandro telo eto Mediterane.
Mitsabo sy manakana ny fivontosan'ny kankana
Ny fery canker dia tena tsy mahazo aina, fery kely miseho ao anaty vava izy ireo. Lazainay aminao ny fomba hitondranao azy ireo voajanahary.
Inona no atao hoe «régime»?
Lazainay anao hoe inona no misy an'io hetsika mahasalama io. Ilay mpamorona azy, Carlos Ríos, mpahay sakafo iray dia manolotra azy io ho vahaolana mba hahasalama.
Soursop, ny voankazo misy fananana sy tombontsoa maro
Soursop dia voankazo manana fananana sy tombony maro izay tokony ho hitanao. Izahay dia manambara izay rehetra tokony ho fantatrao.
Zava-maniry ilain'ny vehivavy rehetra
Ny vehivavy dia mila sakafo misy otrikaina sasany noho ny toetran'ny vatany. Miresaka momba ny sasany amin'izy ireo izahay.
Inona no hatao amin'ny onja hafanana
Ny onja hafanana mijaly dia mety miteraka fahavoazana be dia be amintsika, mahatonga antsika hahatsapa ho ratsy, misavoritaka ary marary an-doha. Lazainay aminao ny soritr'aretina sy ny fomba hisorohana azy.
Ahoana ny fomba hahasalama kokoa ny salady
Manome anao hevitra sy torohevitra vitsivitsy izahay hahatonga ny salady lovia tena mahasalama, tsy hampiana kaloria fanampiny.
Antibiotika manasitrana ny aretin-kibo
Lazainay aminao hoe iza no antibiotika tsara indrindra hitsaboana ny aretin-kiso manelingelina. Aza manadio tena ary mankanesa any amin'ny dokoteranao.
Angano momba ny fanafainganana ny metabolism hanary lanja
Lazainay aminao hoe inona ny angano mivezivezy momba ny metabolisma sy ny fomba hanafainganana azy. Lazainay aminao hoe iza izy ireo eto ambany, tandremo.
Izay ilain'ny hoditrao raha vao miposaka amin'ny masoandro izy
Ny hoditrao amin'ny fahavaratra dia mijaly be amin'ny fiposahan'ny masoandro, holazainay aminao ny fomba ahafahanao miaro ny hoditrao sy hikarakara azy aorian'ny filentehan'ny masoandro.
Ahoana ny fomba hampihenana ny fahanterana
Raha tsy tianao ny handray ny fahanterana alohan'ny fotoanao dia araho ireto torohevitra ireto hanampy anao hijanona ho tanora kokoa hatrany!
Inona no atao hoe cellulitis mifindra? Hilaza aminao izahay avy eo
Ny cellulitis mitondra otrikaretina dia aretina mahazatra ary raha tsy voatsabo dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny fahasalamantsika. Noho izany, milaza aminao bebe kokoa momba izany izahay.
Mihinana handresy ny adin-tsaina
Misy olona misakafo tafahoatra tsy nahy handresena ny adin-tsaina, afaka mihinana tsara ianao ary hanjavona ny adin-tsaina ... Toy izao ...
Ahoana no fanasitranana bunion
Ny fanasitranana bunion dia mety tsy ho tsotra araka ny eritreretintsika. Fa marina ihany koa fa io aretina io dia azo raisina tsara kokoa raha mihaino torohevitra sasany isika
Maninona ny adin-tsaina no miteraka olana amin'ny fandevonan-kanina
Ny fihenan'ny adin-tsaina tsy tapaka dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana lehibe sy olana amin'ny fandevonan-kanina koa.
Ny tebiteby momba ny sakafo rehefa lanja very
Ny fananana ahiahy rehefa misakafo ianao mba hampihena ny lanjanao dia ara-dalàna ... Raha ny tokony ho izy dia tokony hianatra mifehy azy ianao mba tsy hifehy anao.
Soa azo avy amin'ny pasteky izay tsy fantatrao
Ireo no tombo-tsoa azo avy amin'ny pastèque izay mety tsy fantatrao, manan-karena asidra amine tena mahasalama izy io, holazainay aminao eto ambany izany.
Sakafo hiadiana amin'ny tsy fahampian-dra
Lazainay aminao hoe inona avy ireo sakafo manampy antsika hiady amin'ny tsy fahampian-dra, inona ny olana ary inona no tsy maintsy ataontsika.
Ahoana ny fampiasana vinaingitra paoma ho an'ny ozatra
Ny vinaingitra aprily ho an'ny zana-kazo dia iray amin'ireo fanasitranana tsara ao an-trano. Tsotra ny fampiasana azy ary miasa tanteraka hanao veloma anao.
Fananana sy tombony azo avy amin'ny pastèque
Ny pasteky dia voankazo matsiro sy fahavaratra izay misy atiny feno rano. Lazainay aminao ny fananana sy ny tombony azo avy amin'izany.
May ny kitapo gilasy, ny fomba hitsaboana azy ireo
Matetika no may ny kitapo gilasy. Noho izany, tsy maintsy fantarintsika ny fomba hisorohana azy ireo ary koa ny fomba hitondrana azy ireo mba hialana amin'ny fahasimbana bebe kokoa.
Lazainay aminao hoe inona avy ireo fananana sy tombontsoa azo avy amin'ny cranberry, voankazo sasany izay tokony ampiana amin'ny sakafo isan'andro.
Ahoana no fanomanana ny hoditrao amin'ny fahavaratra
Raha ny tadiavinao dia ny hanana tan tsara amin'ity fahavaratra ity dia holazainay aminao izay tokony hataonao hanomanana ny hoditra ary tsy hampidi-doza ny fahasalaman'ny dermis anao.
Inona no mitranga raha mihena haingana aho? Lazainay aminao
Ny fihenan-danja haingana dia mety hanimba ny fahasalamantsika raha tsy heverintsika fa ny fomba tsara indrindra hampihenana ny lanja dia ny fanaovana azy miadana sy milamina.
Izany dia hanampy anao hitantana ny adin-tsaina mandritra ny fitondrana vohoka.
Ny adin-tsaina mandritra ny fitondrana vohoka dia tena ratsy ary mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny zaza, manoro hevitra anao izahay mba handray an-tsaina ny torohevitray.
Atsaharo haingana sy mahomby ny fihenan'ny volo
Raha mijaly noho ny fihenan'ny volo ianao, dia holazainay aminao ny antony sy ny fitsaboana tsara indrindra ary ny fitsaboana voajanahary mba hampitsaharana izany.
Fangaro mahagaga! Hampihena ny cellulite izy ireo
Mahita akora tsara hanalana na hampihenana ny cellulite izahay. Lazainay aminao hoe inona avy izy ireo mba hahafahanao manao ireo fitsaboana ireo any an-trano.
Inona no omen'ny vitamina C anao
Lazainay aminao hoe inona ny anjara vitamina C amin'ny vatana, satria otrikaina tena lehibe izy io ho an'ny fahasalaman'ny hoditra na taolana.
Aretin-nify? Manaova veloma miaraka amin'ny toro-hevitray
Ny fanaintainana nify dia iray amin'ireo fanaintainana fahita indrindra, na izany aza, tsy mila tsy jerentsika izany, satria mety hisy antony miafina lehibe kokoa.
Mitsabo voajanahary ny blister ary misoroka ny fisehoany
Ny blames dia mipoitra avy amin'ny fahasosoran'ny fitaovana amin'ny hoditsika, mipoitra avy amin'ny may, na amin'ny hatsembohana be loatra. Lazainay aminao ny fomba hitsaboana azy ireo.
Sakafo mananasy, ny fanoherana tokony ho fantatrao
Ny sakafo mananasy dia sakafo tsotra tokony hatao nefa miaraka amin'izay sarotra, satria mila ezaka be izany ary ho mailo amin'ny fanoherana azy.
Ny tombony lehibe azo avy amin'ny Valerian
Ny tombotsoan'ny valerian dia lehibe kokoa noho ny nieritreretantsika azy. Fitsaboana voajanahary izay tsy maintsy raisintsika.
Ahoana no hanakanana mora foana ny kaloria amin'ny sakafo
Lazainay aminao ny tetika mahaliana sasany hanakanana kaloria amin'ny sakafo amin'ny fomba tsotra, miaraka amin'ny dingana mora vitan'ny tsirairay.
Lafarinina Carob, fananana ary tombontsoa tokony ho fantatrao
Raha mbola tsy nanandrana lafarinina carob ianao dia holazainay aminao hoe inona avy ireo fananany mba ho raiki-pitia amin'ity lafarinina ity ianao ary hampiditra azy ao anaty sakafonao.
Ny hoditra mangidihidy sy ny antony mahazatra azy indrindra
Ny hoditra mangidihidy dia mety hipoitra avy amin'ny antony maro samihafa ary toy izany, ny tsirairay amin'izy ireo dia mety manana fanafody hafa tanteraka izay tsy maintsy fantatsika tsara.
Miresaka momba an'i Prozac izahay, ny antidepressant be mpampiasa indrindra
Mety efa naheno momba Prozac ianao, zava-mahadomelina izay manana toetra antidepressant. Betsaka ny olona nisafidy ny handray an'ity fanafody ity, ...
Ahoana ny fisotroana tsiranoka bebe kokoa
Lazainay aminao ny tetika mahaliana sasany hahafahana misotro tsiranoka bebe kokoa isan'andro, zavatra iray tena ilaina tokoa hanatsarana ny fahasalamantsika.
Dingana manampy anao hanary lanja amin'ny fomba mahasalama
Ny fahaverezan'ny lanja amin'ny fomba mahasalama dia iray amin'ireo hevitra tsara hapetraka. Avelanay miaraka amina toro-hevitra sy dingana maromaro ianao amin'izany.
Inona no atao hoe fampiononana mahatsapa?
Ny fampitsaharana fahatsiarovan-tena dia teknika azo antoka izay mamela antsika hanao fomba fitsaboana kely tsy misy fanaintainana. Holazainay aminao eto ambany ny zava-drehetra.
Alergia vovobony? Lazainay anao ny fanafody voajanahary tsara indrindra hiadiana amin'izany
Ny fananana allergy amin'ny vovobony dia manelingelina tokoa, noho izany, holazainay aminao eto ambany hoe inona ireo vokatra tsara azonao raisina hanatsarana ny fahasalamanao.
Ny voa azo hanina mahasalama indrindra sy ny tombontsoa lehibe azony
Izahay dia mamerina mijery ireo voa azo hanina mahasalama indrindra sy ireo tombontsoa lehibe avelan'izy ireo ho an'ny vatantsika sy ny hoditra.
Fambara an'ny adin-tsaina post
Lazainay aminao hoe inona ireo soritr'aretin'ny fihenjanana aorian'ny traumatiska mba hitondranao azy ireo mba tsy hametrahan'ny vatanao ny tenany amin'ny loza amin'ny fotoana rehetra.
Ahoana ny fomba hisorohana ny kibo mivonto
Lazainay aminao ny fomba hisorohana ny kibo mibontsina, olan'ny olona maro ary mety ho avy amin'ny fahazaran-dratsy ratsy isan'andro izany.
Fananana sy tombontsoa azo avy amin'ny blackberry
Lazainay aminao hoe inona avy ireo tombontsoa sy fananana lehibe amin'ny blackberry, voankazo mena matsiro sy mahasalama.
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Diet Ketogenika
Ny sakafo ketogenika dia mahazo vahana, tsy maintsy fantarintsika izay mety ateraky ny karazan-tsakafo mba tsy hanimba ny fahasalamanao.
Torohevitra hiadiana amin'ny fanaintainana ambany
Tsy mora foana ny miady amin'ny fanaintainana ambany. Saingy manana ny sasany amin'ireo vahaolana tsara indrindra azonao atao ianao.
Karbohidraty izay tsy mampatavy anao
Lazainay aminao hoe iza avy amin'ireo gliosida tsy mampatavy anao, no mahasalama indrindra hahafahanao mampiditra azy ireo amin'ny sakafonao mba hihena.
Ireo no fananan'ny voasarimakirana, ny citrus lamaody
Ny lemon dia tena mahasoa ny vatana, holazainay aminao hoe inona ireo fananana mety hahaliana anao indrindra ary inona ny fanafody an-trano amporisihinay.
Ireo zava-maniry manitra tsara indrindra amin'ny sakafo mediteraneana
Aza misalasala mampiditra an'ireto zava-maniry manitra manaraka ireto ao anaty resipeo, fikitika manokana ho an'ny lovia ho anao raha hahasoa anao amin'ny fananany izy ireo.
Mampihena lanja amin'ireo zava-pisotro manadio ireo
Raha te hikarakara ny vatanao ianao ary te hihena koa, atoro anao ny fomba ahafahanao manao izany noho ireo zava-pisotro manadio ireo.
Mampihena lanja amin'ny bisikileta fanatanjahan-tena
Miaraka amin'ny elliptical, ny bisikileta fanatanjahan-tena dia iray amin'ireo milina be mpampiasa indrindra ao amin'ny gym. Izy ireo no masinina kardio mety indrindra amin'ny fihenan'ny lanja.
Mamaritra ny vatanao fa mandefa anao noho ny tsy fahampian'ny potasioma
Ny potasioma dia otrikaina iray tena lehibe izay tsy maintsy tazomintsika amin'ny vatantsika, raha manana fatiantoka iray isika dia handefa famantarana ireo vatantsika. Raiso an-tsoratra
Fanapoizinana ara-tsakafo: antony, soritr'aretina ary inona no hatao amin'izany
Mianara bebe kokoa momba ny antony ary koa ny soritr'aretin'ny fanapoizinana ara-sakafo. Na eo aza izany fisorohana izany dia ampahany lehibe.
Raha atleta sy vegan ianao dia liana amin'ity lahatsoratra ity
Raha atleta ianao ary manaraka sakafo vegan, mahaliana anao ity lahatsoratra ity, holazainay aminao hoe inona avy ireo sakafo tokony horaisina raha te hanana fahasalamana ianao.
Tombontsoa sy fananana dite Matcha
Lazainay aminao ny tombontsoa sy ny fananan'ny dite matcha lehibe sy taloha, zava-pisotro mahasalama tena ho an'ny vatana.
Attention! Mety hampitombo ny migraines izany.
Raha iray amin'ireo olona mijaly amin'ny migraines ianao ary te hisoroka azy ireo, dia raiso ny fanoloran-kevitra mba tsy hijerenanao azy ireo mitohy.
Ahoana ny fomba hampihenana ny fivontosan'ny kibo haingana sy mahomby
Tsy mora foana ny manala ny kibo. Fa marina fa zavatra izay matetika mitranga matetika kokoa noho ny eritreretintsika izany.
Mitondra fitsaboana voajanahary amin'ny tsy fivalanan'ny urinary
Raiso an-tsoratra ny famantarana mba hisorohana ny tsy fihinanan'ny urinary, amin'izay hifehezana ny fatiantoka ianao ary afaka manatsara ny kalitaon'ny fiainanao.
Aza miteny nikôtinina amin'ireto fitsaboana voajanahary ireto
Mialà amin'ny sigara ary ialao ny fiankinan-doha amin'ny nikôtinina amin'ny fitsaboana voajanahary izay lazainay aminao etsy ambany.
Ny maha-zava-dehibe ny fitazonana nify matanjaka sy salama
Ny fahasalamana am-bava dia tena zava-dehibe amin'ny olona rehetra, mahatonga antsika hanana fiainana tsaratsara kokoa sy tsiky mahafinaritra. Makà nify salama sy matanjaka.
Fananana dite voasary
Lazainay aminao ny momba ny fananana dite volomboasary, zava-pisotro izay afaka manampy anao hihena sy hitaona anao ho tanora.
Veganism, mihoatra ny fironana
Ny Veganism dia fomba fiainana mihoatra ny fironana mandalo fotsiny ary holazainay aminao ny antony mety hahasoa anao ny manaraka an'io filozofia io.
Voankazo irery: ny tombony azony ary ny fitambaran'izy ireo tsara indrindra
Jereo raha mahasoa ny mihinana voankazo irery ary raha izany, inona ireo fitambarana tsara indrindra azontsika atao eo amin'izy ireo mba hahasoa ny fahasalamana
Tombontsoa sy toetran'ny ran'ny dragona
Ny fitrandrahana ny ran'i Dragon dia vokatra voajanahary izay afaka manampy betsaka amin'ny fitsaboana ny ratra kely, ny ratra na ny fery.
Ampitomboy ny fiarovanao voajanahary
Ataovy mailo hatrany ny fiarovan-tenanao sy ny toetoetrany amin'ireto sakafo manaraka ireto: fomba tsotra sy azo antoka itahirizana ny aretina izany.
Misaraka sakafo sy ny fomba fampiasana azy io mba hampihena ny lanja
Lazainay aminao ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny sakafo nesorina tsy fantatra sy ny fampiasana azy io mba hampihenana lanja sy hihinanana tsara.
Sakafo anti-cellulite hiadiana amin'ny hoditra voasarimakirana
Lazainay aminao ny fomba fanatanterahana sakafo anti-cellulite hampihenana ny hoditry ny volomboasary ary hanatsarana ny endrika hita amin'ny hoditra.
Eczema amin'ny hodi-maso: antony sy fomba tokony hitondrantsika azy
Ny eczema amin'ny hodi-maso dia iray amin'ireo olana matetika indrindra ary toy izany dia ambaranay aminao ny antony rehetra ary koa ny fomba tokony hitondranay azy hanatsarana azy.
Mikarakara nify mora tohina
Lazainay aminao hoe inona ny fikarakarana fototra ho an'ny nify mora tohina, ny teknika hanasitranana azy ireo ary koa inona no antony.
Rano mitete, zava-pisotro mamelombelona sy mahasoa ho an'ny vatana
Lazainay aminao hoe inona avy ireo tombony sy fanoherana ny rano mamirapiratra, manorata ary manomboka mihinana azy anio!
Erythema amin'ny masoandro, karakarao amin'ny hoditry ny masoandro ny hodinao!
Ny erythema amin'ny masoandro dia olana amin'ny hoditra aorian'ny fiposahan'ny masoandro. Noho izany dia tokony hitandrina isika ary hikarakara fatratra ny vatantsika amin'ny farany ambony.
Fananana sy tombony azo avy amin'ny safrona
Ny safrona dia vokatra manome tsiro mahafinaritra ho an'ny lovia, sakafo koa manampy antsika hanatsara ny fahasalamantsika izany.
Afaka mahita rano raozy amin'ny mpamokatra raokandro ianao, na dia sahinao aza ny manamboatra rano raozy ao an-trano. Makà!
Sakafo detox sy ny tombontsoany
Matetika ny maheno momba ny sakafo detox, ka lazainay aminao hoe inona ireo sakafo sy sakafo ireo, ho fanampin'ny soritr'aretina ananany.
Rano voninkazo voasary, fananana ary tombony
Mety efa naheno momba ny rano voninkazo voasary ianao, vokatra azo rehefa avy nanaparitaka ny famafazana felam-boasary.
Eczema amin'ny hoditra, antony ary fitsaboana
Ny eczema amin'ny hoditra dia iray amin'ireo olana mahazatra amin'ny hoditra. Izany no antony hiresahantsika androany ny antony sy ny soritr'aretina ary ny fitsaboana.
Ohatrinona ny sira horaisina isan'andro
Lazainay aminao hoe ohatrinona ny sira tokony ho raina isan'andro amin'ny sakafo mahasalama ary koa inona ny sira mandray anjara amin'ny vatantsika mba hihazonana azy ho salama.
Ahoana ny fomba hanomezana otra tsara
Mety ho azon'ny rehetra atao izao ny manotra tsara. Mila manaraka andiana dingana fototra fotsiny ianao izay hazavainay amin'ny fomba tsotra.
Tsara ve ny milentika masoandro? Ireo tombony sy fatiantoka tokony ho fantatrao
Manolotra anao andian-tombony maro izahay ary koa fatiantoka ny filentehan'ny masoandro. Satria afaka mahasoa antsika tokoa izy io, nefa koa ny vokany mifanohitra amin'izany.
Tena mahazatra ny gazy, nefa miaraka amin'izay koa ny mahasosotra. Lazainay aminao hoe inona avy ireo sakafo tokony hialanao amin'ny sakafonao sy izay tokony hampidirina mba hisorohana azy ireo. Makà!
Jereo izay rehetra atolotry ny voankazo guava tropika anao, voankazo matsiro izay manana fananana lehibe ho an'ny fahasalamanao.
Fa maninona no mihinana voankazo vanim-potoana
Mampiseho aminao ny tombony azo avy amin'ny fihinanana voankazo matsiro sy karazana voankazo ananantsika isaky ny vanim-potoana.
Ireo no sakafo misy antioxidants be indrindra
Mianara momba ny sakafo manankarena antioksida mba hampitomboana ny ady amin'ireo radikaly maimaim-poana, fotoana iray hitazonana ny vatanao ho salama.
Ahoana no hahalalana raha tsy mahazaka lactose ianao
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao milaza raha tsy mahazaka lactose ianao, manomboka amin'ny soritr'aretina ka hatrany amin'ny fitsapana tsotra hataon'ny dokoteranao.
Inona no atao hoe Moringa, inona izy io ary ahoana no fampiasana azy
Ity dia hazo taloha, mahery sy mahagaga. Hilaza aminao izahay hoe inona ireo tombony sy fananana azon'ny raviny sy ny masony atolotra anao.
Gallstones, izay rehetra tokony ho fantatrao
Zava-dehibe ny fahafantarana ny fanaintainana sy ireo hafatra izay ampitain'ny vatantsika ho antsika, mianatra mamantatra ireo vato ao anaty gallbladder.
Fananana dite mananasy
Jereo ny tombony rehetra sy ny fananan'ny dite mananasy, zava-pisotro mamelombelona sy diuretic izay tonga lafatra ao anaty sakafo.
Mianara mamantatra rehefa noana ianao ary rehefa manan-kanina be. Ireto ny tetika hialana amin'ny snack eo anelanelan'ny sakafo, manamarika ary mora very lanja.
Jereo ny tombony azo avy amin'ny masomboly sesame
Lazainay aminao hoe inona avy ireo fananana rehetra sy tombontsoa ara-pahasalamana avy amin'ny masomboly sesame malaza sy matsiro.
Ny iray amin'ireo sakafo tokony ampidirinao isan'andro isan'andro dia ny mikraoba varimbazaha, holazainay aminao ny tombony rehetra izay mety ho entiny amin'ny vatanao.
Ny magnesium dia zava-dehibe tokoa amin'ny fitazonana vatana salama, indraindray tsy tsapantsika izany fa mila salama kokoa isika.
Ahoana ny fomba fampihenan'ny olo-malaza lanja, ny sakafony ary ny hafetseny
Ho hitanao ny fomba mampihena ny lanjan'ny vehivavy malaza noho ny andian-tsakafo sy amin'ny tranga hafa, amin'ny fika sasany izay napetrany ary tokony ho fantatrao.
Fotsy ny nifinao amin'ireto vokatra voajanahary manaraka ireto
Ny nify dia azo lotoina amin'ny fahadiovana tsy madio na amin'ny fihinanana vokatra manimba ny enamel. Lazainay aminao ny fomba famafazana voajanahary azy ireo.
Sakafo mahasalama miaraka amin'ny ranom-boankazo detox
Lazainay aminao ny antony mety mety raha manomboka sakafo ara-pahasalamana miaraka amin'ny antsoina hoe ranom-boankazo detox, feno otrikaina.
Sakafo mpamokatra solika, ialao ireo torohevitra ireo
Manomboha mifehy ny gazy amin'ny alàlan'ny fisorohana an'ity andiana sakafo ity ary sorohy miaraka amin'ny tolo-kevitray sy toro-hevitra mba hialana amin'izany.
Ny pea dia sakafo izay tsy mila ataontsika tsinontsinona
Sakafo tena mahasoa ho an'ny vatantsika ny pitipoà, ny proteinina dia mety indrindra ho an'ny atleta na vegetarian. Makà!
Ahoana ny fomba matavy nefa amin'ny fomba mahasalama
Raha te hahafantatra ny fomba ahazoana lanja amin'ny fomba salama ianao dia ireto misy torohevitra tsara indrindra. Amin'izany no hanatsaranao ny tonon'ny hozanao.
Sakafo mba hanana endrika
Lazainay aminao ny tsiambaratelon'ny sakafo mahasalama mba hitazomana ny endriny, zavatra tena ilaina raha toa ka hanao spaoro isika ary hanova ny fahazarantsika.
Fanazaran-tena 6 amin'ny cellulite
Mila manao andiana fanazaran-tena amin'ny cellulite izay tena miasa isika. Noho izany dia manonona fanazaran-tena tsara tokony hatao ao an-trano izahay.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny dite basil
Lazainay aminao hoe inona avy ireo fananana sy tombontsoa azo avy amin'ilay dite basilety lehibe, izay fanoherana ny otrik'aretina sy bakteria.
Fa maninona no miseho hemôrôida? Antony sy ny fomba hisorohana azy ireo
Misy fiatraikany amin'ny 50% -n'ny mponina ny hemoroidia, holazainay aminao ny antony mahatonga ny fisehoany matetika sy ny fomba ahafahanao misoroka azy ireo.
Tombony lehibe amin'ny akondro ho an'ny fahasalamana
Jereo ny tombony lehibe amin'ny fahasalamana amin'ny akondro. Voankazo iray izay tsy maintsy misy foana isan'andro isan'andro.
Lazainay aminao ny tombontsoa sy ny fananan'ny voahangy, voankazo malaza be ary ankafizin'ny tsirony sy ny sanda ara-tsakafo.
Fomba fanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana
Manome anao ny lakilen'ny fanamafisana ny hery fiarovanao amin'ny fomba voajanahary. Noho izany dia manala aretina sasany ary mahatsiaro tena ho lehibe kokoa.
Soa azo avy amin'ny fiaramanidina rano
Lazainay aminao ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiharana ny rano anaty rano, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fanatsarana ny fahasalamana.
Torohevitra hilazana veloma ny sery sy ny gripa amin'ity ririnina ity
Mora ny manao veloma ny sery sy gripa miaraka amin'ny toro-hevitra vitsivitsy toy izao. Amin'izany dia tsy misy mahasakana ny drafitrao amin'ity vanim-potoana ity.
Fantaro izay mety hiteraka teboka eo amin'ny tavanao
Ireo teboka amin'ny tarehy dia mety hiseho vokarina noho ny antony maro, holazainay aminao ny momba azy ireo ary holazainay aminao ny fitsaboana voajanahary. Aza adino izany!
Fomba fihinana tsara sy mahasalama
Ny zon'ny mihinana dia tsy midika hoe mihinana sakafo maharitra. Aleo mifantina andiana dingana voalanjalanja mety hidika amin'ny fahasalamana tsara kokoa.
Toetran'ny trondro manga salama
Atorinay anao ny fananana sy ny tombony rehetra ananan'ny trondro misy menaka ao amin'ny vatantsika, ho loharanon'ny asidra matavy Omega-3.
Ahoana ny fandoroana haingana ny kaloria
Azo atao ny mandoro kaloria haingana. Satria amin'ny zava-misy tsotra amin'ny endrika hafetsena dia afaka mankafy isan'andro isika, tsy mijaly. Jereo izy ireo!
Lazainay aminao hoe firy ny kaloria ananan'ny paoma ary koa inona ny fananany sy ny tombony azo avy amin'ny fahasalamantsika.
Fananana sy tombony azo avy amin'ny ginseng
Ireo no fananana sy tombony miavaka indrindra amin'ny ginseng, faka izay hankamamianao ny fikarakarany tsara ny vatantsika. Tsy hadinonao izany!
Mihinana jelly hampihena ny lanja sy hampihena ny lanja
Ny gelatin dia mety ho tonga sakafom-pofonao ankafizinao mandritra ny dingan'ny fihenan-danja, mora ny manomana sy mihinana. Andao hankafy azy io!
Ahoana ny fomba hanararaotana kefir sy hanararaotana ireo tombony lehibe azo avy aminy
Lazainay aminao ny fomba hakana kefir hahafahana mampifangaro azy io isan'andro sy handrendrika ireo tombony maro azo avy amin'izany. Vokatra tena mahasalama.
Inona ny masirasira mahavelona ary inona no tombony azo avy amin'izany?
Ity masirasira ara-tsakafo ity dia tsy tokony hanjavona amin'ny sakafonao, holazainay aminao ny fomba ahafahanao mihinana azy io ary inona ireo fananana sy tombontsoa entiny amintsika.
Chilblains, fantaro ny antony sy ny fitsaboana azy ireo
Lazainay aminao ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny olan'ny sakamalao izay misy fiatraikany aminay mandritra ny ririnina, hisorohana na hanasitranana azy ireo.
Ianaro ny fomba hikarakaranao ny faritra akaiky anao miaraka amin'ireto toro-hevitra manaraka ireto
Ny faritra akaiky ny vehivavy dia marefo, mila fanazarana fahadiovana sy fikarakarana izy io mba hihazonana azy ho salama sy tsy misy olana. Mariho ny torohevitray.
Tombony azo avy amin'ny dipoavatra
Ireto ny tombontsoa mahafinaritra azon'ny dite peppermint omena anao, fahafinaretana ho an'ny vatanao sy ho an'ny laninao.
Fantatrao ve ny tombotsoan'ny emboka manitra? Lazainay aminao
Lazainay aminao ny toetra tsara atolotry ny emboka manitra anao, fomba iray tsara hanatsarana ny toetranao sy ny fiadananao anaty. Tadiavo ny hanitra tianao indrindra.
Tombony azo amin'ny fisaintsainana
Ny fisaintsainana dia ampiharina hatrany amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao, ny tombony azo avy amintsika dia maro, fantaro izy rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity!
Tombony azo avy amin'ny akupunktur
Ny akupunktur dia mety mahasoa amin'ny fitsaboana aretina sasany amin'ny vatana, teknika efa antitra izay mbola ampiasaina ankehitriny.
Soraty amin'ny fantsika, antony ary vahaolana
Raha misy marika mihatra amin'ny hohonao dia tokony ho fantatrao ny antony mamokatra azy ireo ary koa ny fanafody tsara indrindra hanalana azy ireo.
Sakafo ambany tavy ho an'ny sakafo mahasalama
Lazainay aminao hoe inona avy ireo sakafo ambany tavy, izay tsara ho an'ny sakafo hypocalorika mba hihena.
Tandremo ny taoninao amam-bolo manaraka ireto
Ireo no fanafody an-trano tsara indrindra azonao atao ao an-trano hitazomana ny taoninao ho tsara, raiso ny fanamarihana amin'ny manaraka.
Impiry aho no tokony manatona dokotera?
Zava-dehibe ny fahalalana hoe rahoviana isika no tokony manatona dokotera, ny fahasalaman'ny masontsika dia mety tsy ho voamariky, fa mila mitandrina ny tenantsika amin'ny lafiny rehetra isika.
Ataovy ao an-tsaina ireo torohevitra ireo raha mila fihenan-danja
Mety ho fanamby ny fahaverezan'ny lanja, lazainay aminao ny andiana torohevitra izay azonao atao hanatanterahana ny tanjonao.
Psoriasis eo an-doha
Hilaza aminao izahay ny fomba ahafahanao manatsara ny toetran'ny psoriasis ao an-doha, ny fitsaboana ary ny torolàlana arahinao raha mijaly amin'izany ianao.
Fananana sy tombony azo avy amin'ny pistachio
Lazainay aminao hoe inona avy ireo fananana sy tombontsoa azo avy amin'ny pistachio ho an'ny vatana, voankazo maina misy tsiro manankarena sy kalitao tena tsara.
Tombony kôlà Kale
Ny tombony omen'i Kale kale antsika dia ireo izay manome fananana lehibe ho an'ny vatantsika, fantaro izy rehetra!
Fanafody an-trano hifehezana ny tselatra mafana
Ny iray amin'ireo soritr'aretin'ny menopause mahazatra dia ny hot flashes, hafanana mety hanelingelina antsika amin'ny toe-javatra rehetra, mianatra mifehy azy ireo.
Fanafody an-trano hitsaboana kalita amin'ny tongotra
Na inona na inona fotoana amin'ny taona, ny tongotsika dia mety mila fitsaharana sy fiheverana kely ho an'ny ...
Sakafo voajanahary hafa ho an'ny Omeprazole
Ireo no sakafo sy fitsaboana voajanahary izay tokony hohaninao mba hisorohana ny aretin'andoha sy ny gastritis, solon'ny omeprazole.
Lazainay aminao ny fananana rehetra sy ny tombony azo avy amin'ny akondro, sakafo tena ankafizina noho ny atin'ny potasioma avo ao aminy.
Ny kaloria ao amin'ny tangerine
Raha miahiahy momba ny kaloria ao anaty tangerine ianao dia hofongarinay ny fisalasalanao. Ankafizo ny iray amin'ireo voankazo manankarena indrindra.
Ny sôkôla no iray amin'ireo stimulant tsara indrindra sy mahaliana
Ny sôkôla angamba dia iray amin'ireo sakafo manaitaitra sy manaitaitra indrindra izay hitantsika eny an-tsena, fantany ny fananany rehetra.
Esory ireo katsentsitra tsinay miaraka amin'ireto akora manaraka ireto
Mateti-pitranga noho ny nieritreretantsika azy io, ny katsentsitra tsinay dia mety hahatratra antsika nefa tsy tsapantsika izany. Raiso an-tsoratra ireto akora ireto hisorohana azy ireo.
Fanafody an-trano hitsaboana molotra maina
Ny molotra maina sy vakivaky dia manelingelina tokoa, maharary ary mitaky fotoana fanasitranana. Noho izany dia mikasa ny hanana azy ireo izy ireo mba ho tonga lafatra foana.
Zavamaniry fanafody hanala ny soritr'aretina mangatsiaka
Ireo no zavamaniry fanafody tokony hanananao eny an-tànanao hatrany hisorohana ny sery sy ny soritr'aretina rehetra mifandraika amin'izany.
Fa maninona aho no reraky ny andro? Antony havizanana
Raha mahatsiaro reraka ianao mandritra ny andro dia mety tsy marina ny fahazaranao dia holazainay aminao ny antony mahatonga an'io havizanana io.
Fananana sy tombony azo avy amin'ny ranom-boankazo
Lazainay aminao ny fananana sy ny tombontsoa azo avy amin'ny ranom-boankazo, vita amin'ny voankazo hafakely izay tsara amin'ny fahasalamanao.
Ahoana no hanombohan'ny psoriasis, soritr'aretina ary antony
Raha nanontany tena ianao hoe manomboka ny psoriasis, dia lazainay aminao anio ny antony sy ny soritr'aretin'ity aretina amin'ny hoditra ity.
Ny antony mahatonga ny palpitations eo amin'ny maso
Lazainay aminao hoe inona ireo antony mahazatra mahatonga anay hahatsapa palpitations amin'ny masontsika, manamarika ary mankanesa any amin'ny dokotera fianakavianao raha hitanao fa ilaina izany.
Ahenao ny fahatsapana am-bava amin'ireto fanafody manaraka ireto ao an-trano
Manorisory tokoa ny mijaly amin'ny fahatsapana am-bava ary indrisy fa maro ny olona mijaly amin'izany, holazainay aminao ny fomba ahafahanao misoroka izany amin'ireo fanafody ao an-trano ireo.
Contlicications tongolo lay
Betsaka ny voalaza momba ny tombontsoa omen'ny tongolo lay antsika, na izany aza, tsy maintsy jerentsika ireo contraindications, izay lazainay aminao eto.
Fananana sy tombony azo avy amin'ny radia
Lazainay aminao hoe inona avy ireo tombontsoa sy fananana manampy amin'ny fahasalamana, legioma izay tena tsara ho an'ny aty ny radishes.
Tombony sy fananana voatabia
Ny voatabia dia mety ho iray amin'ireo sakafo be mpampiasa indrindra ao an-dakozia, noho ny tsirony, ny endriny ary ...
Ny lamban-tongotra dia iray amin'ny tetika tonga lafatra hampihenana ny fanaintainana sy ny fivontosana. Miloka amin'ny fitsaharana ny tongotrao sy ny vatanao.
Vary varimbazaha, tombony sy fananana ao aminy
Lazainay aminao ny tombontsoa sy ny fananana rehetra avy amin'ny tsaramaso varimbazaha, sakafo misy atiny fibra avo lenta.
Ahoana no hisorohana ny mony
Lazainay aminao ny torolàlana tsara indrindra tokony harahinao na raisina mba hisorohana ny mony amin'ny tarehy na amin'ny toerana rehetra amin'ny vatana.
Tsara ve ny mifady hanina?
Betsaka ny olona mifady hanina amin'ny fiainany andavanandro na efa nanao an'izany, etsy andaniny, maro ny hafa tsy mahalala ...
Ahoana ny fanasitranana rantsan-tongotra
Raha te hahalala ny antony ianao ary koa ny fanasitranana fantsika natsofoka, eto dia avelanay anao ny valiny tsara indrindra sy ny dingana manaraka azy io hitsaboana azy.
Ahoana ny fomba fanesorana mony tsara nefa tsy mamela marika
Raha te-hanary pimples amin'ny fomba mahomby ianao ary tsy mamela marika, mariho ireo torohevitray, tsotra sy mahomby izy ireo hahatratrarana azy.
Fanafody an-trano hamongorana ny fery mangatsiaka
Lazainay aminao ireo fanafody telo ao an-trano izay azonao apetaka amin'ny aretinao mangatsiaka mba hisorohana azy tsy hiparitaka ary hahatonga azy io hanjavona voajanahary.
Ahoana ny fampidinana triglycerides
Ny fananana triglycerides avo dia mety hanimba ny fahasalamantsika, holazainay aminao ny fomba hampihenanao ireo ambaratonga ireo hanatsarana ny fahasalamanao.
Fananana sy tombontsoa azo avy amin'ny grapefruit
Lazainay aminao ny fananana sy ny tombontsoa rehetra azon'ny grapefruit ao amin'ny vatantsika, voankazo tena ankafizintsika amin'ny sakafo.
Sakafo mahazatra amin'ny fararano sy ririnina
Aza adino ireo sakafo mahazatra amin'ny fararano sy ririnina. Ny voankazo sy ny legioma dia samy manana ny mahavelona azy.
Inona ny atao hoe carboxytherapy ary inona no ilana azy?
Inona ny atao hoe carboxytherapy, inona no ilana azy ary inona ny tombony azony raha manao izany isika? Fitsaboana estetika amin'ny tarehy na amin'ny vatana izany. Mianara bebe kokoa eto.
Cavitation, inona izany ary inona no ampiasaina
Raha mieritreritra ny hanao session kavitation ianao dia holazainay aminao hoe inona ny fomba fiasa sy ireo tombontsoa mety ho entiny aminao.
Ahoana ny fakana oat bran
Oat bran dia iray amin'ireo akora lehibe ampidirina amin'ny sakafontsika. Mbola tsy mahalala hoe ahoana? Manome anao ny hevitra tsara indrindra izahay.
Fananana sy tombony azo avy amin'ny ronono soja
Asehonay aminao ny tombony sy ny toetran'ny soymilk, novokarin'ny voa soja, legioma mahasalama.
Inona ny menaka Johnson ary ampiasaina amin'ny inona izy io?
Ny menaka Johnson dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'ny tsena iray manontolo, fantaro izay rehetra azony atao ho anao mba tsy hisalasala mividy azy amin'ny manaraka.
Ankafizo ny voankazo ririnina tsara indrindra
Lazainay aminao ny fananan'ny voankazo ririnina tsara indrindra, hankafizanao ny tsirony sy ny tombontsoa lehibe ho an'ny fahasalamana.
Fanafody an-trano hanesorana ny feo mavo amin'ny hoho
Raha manana feo mavo tsy mahafinaritra ny hohoo ary te-hanary azy ianao dia mariho ity fitsaboana an-trano ity mba hanafotsy ny hoho mora foana.
Misotro rano amin'ny sakafo, tsara sa ratsy?
Lazainay aminao raha tena tsara na ratsy ny misotro rano misy sakafo ary raha misy fiantraikany amin'ny fizotran'ny fandevonan-kanina. Atsipazo indray mandeha monja ireo angano!
Ahenao ny cellulite amin'ny kafe
Lazainay aminao ny momba ny fitsaboana any an-trano sy voajanahary azonao atao mba hisorohana ny cellulite amin'ny vatana ary tsy miankina amin'ny kafe ihany. Mariho ny fomba nanomanana azy!
Tombony sy fanoherana ny taratra UVA
Ny taratra UV avy ao amin'ny trano rantsan-kazo dia mety hanana tombony ary koa fatiantoka, fantaro izay ho fanapahan-kevitr'izy ireo amin'ny fotoana manaraka anaovanao fivoriana.
Tombony azo amin'ny fandroana tongotra
Ny fandroana epies dia mety amin'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny rantsambatanay, milaza aminao izahay ny karazany telo izay azonao atao mora foana ao an-trano.
Fomba hampihenana lanja 3 kilao mora sy azo antoka
Ny fahaverezana 3 kilao dia azonao atao izany raha manaraka ny torohevitray izy ireo, dia lojika sy azo ampiharina ary raha raisinao izany dia ho vitanao amin'ny fahasalamana.
Tsaramaso maintso sy ny fananany
Ny tsaramaso maitso dia tsy tokony hanjavona amin'ny sakafonao satria manana fananana tsy manam-petra ary koa tombony ho an'ny fahasalamanao sy ny vatanao.
Tsara ve ny misotro rano mandritra ny sakafo?
Mila misotro rano isan'andro ianao, na izany aza, misy ny finoana fa ratsy ny misotro rano mandritra ny sakafo. Fantaro ny antony.
Inona avy ireo fananana sy tombontsoa azo avy amin'ny vary mena?
Raha mbola tsy fantatrao ny tombony sy ny fananana lehibe omen'ny vary mena antsika dia aza mitaredretra fa holazainay aminao eto ambany izany.
Ianaro ny momba ny fanasitranana tsara indrindra an'ny birdseed
Ny canary canary dia manana tombony lehibe sy fananana fanafody izay mety tsy fantatrao, eto ambany izahay dia hilaza aminao ny fomba azonao ampiasaina azy io hanatsarana ny fahasalamanao
Aloe vera ho an'ny warts
Ianaro ny fomba hialana amin'ny zana-tsipika manelingelina tanana sy rantsan-tànana amin'ny aloe vera, zavamaniry iray afaka manampy anao amin'ny aretina sy ny aretim-panafody maro.
Mony mandritra ny fitondrana vohoka
Vehivavy maro no mijaly amin'ny fihenan'ny mony mandritra ny fitondrana vohoka, mahazatra kokoa noho ny eritreretinay izany, holazainay aminao ny fomba ahafahanao manala ireo mony ireo.
Betsaka ny angano momba ny sakafo izay tsy maintsy manomboka hariantsika. Androany dia holazainay aminao ny momba ny sasany amin'ireo malaza indrindra ary tokony hiala ianao.
Fananan'ny Garcinina Cambogia na Tamarind Malabar
Garcinin cambogia dia voankazo manana fananana sy tombony lehibe, ao anatin'izany ny fanampiana anao hampihena.
Fa maninona no mony ny zanako? Antony sy fitsaboana
Ny mony zazakely dia mahazatra kokoa noho ny eritreretintsika, eto dia lazainay aminao hoe inona ny antony sy ny fitsaboana harahina. Mankanisa dokotera foana.
Voankazo mena sy ireo tombony lehibe azo avy amin'izany
Lazainay aminao ny karazana voankazo mena rehetra ananantsika ary koa ny tombontsoa lehibe avelany ho an'ny fahasalamana. Tsy tokony ho very amin'ny sakafonao izy ireo!
Ny fampiasana rehetra izay tsy fantatrao momba ny menaka zaza
Azonao atao ny mampiasa menaka zaza amin'ny lafin-javatra maro hafa mety tsy fantatrao, holazainay aminao momba azy ireo eto ambany. Aza mitsahatra ny mahafantatra azy ireo!
Fa maninona no malaza be ny menaka biolojika? Fantaro eto ny valiny
Menaka malaza mandresy vehivavy maro, fantaro izay fananana sy tombony omen'ny menaka bio antsika.
Ny fananana voa chia
Ny masomboly chia dia sakafo manana fananana mahavelona be dia be, koa sakafo super izay tsy maintsy ampidirina ao anaty sakafo.
Ny tetika tsara indrindra hanamafisana ny kitrokely sy ny zanak'omby
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao manadio ny kitrokelinao sy ny zanak'omby amin'ny fanazaran-tena sasany, mamantatra ny antony ary ahoana no ahafahanao mamarana azy io mora foana.
Mianara manafina ny sola vehivavy
Misy fiantraikany amin'ny vehivavy maro ny sola amin'ny vehivavy noho ny eritreretintsika, aza hadino ny torohevitra tsara indrindra hianarantsika manafina azy amin'ny fihetsika kely.
Fitsaboana amin'ny alopecia vehivavy
Raha te hahalala ny fomba hitsaboana alopecia vehivavy ianao, dia holazainay aminao hoe inona ny antony mahazatra indrindra ary inona avy ny fitsaboana azy ireo.
Alopecia amin'ny vehivavy
Mety ho lohahevitra fady izany fa tonga hilazantsika izay misy ny alopecia amin'ny vehivavy, ny karazana hitantsika ary ny antony nahatonga izany.
Inona no ilana valerian, sy fananana ary fanoherana
Valerian dia zavamaniry fanta-daza izay efa nanandramantsika rehetra taloha, eto dia lazainay anao hoe inona izany ary inona no contraindications.
Fananana sy tombontsoa azo avy amin'ny voanjo
Betsaka ny fananana sy tombontsoa ananan'ny voa ho an'ny fahasalamana. Noho izany, tsara ny fahafantaranareo azy rehetra.
Sakafo mahavoky sakafo mety amin'ny sakafo maraina
Raha ny tianao dia ny hisakafo maraina toy ny mpanjaka ary ho voky tontolo maraina, tandremo fa lazainay aminao izay sakafo ilainao.
Ny voankazo fararano dia tsara ho an'ny vatantsika
Tonga ny voankazo fararano mba hahafahantsika mankafy tsiro vaovao sy sakafo isan-karazany hanampiana ny sakafonay.
Sakafo voarara amin'ny sakafo alkaly
Raha mieritreritra ny hanao sakafo alkaline ianao dia holazainay aminao hoe inona avy ireo sakafo tokony hialanao mba hahavitana tsara.
Torohevitra ara-pahasalamana hanatsarana ny fiainanao
Ny torohevitra momba ny fahasalamana dia fototry ny fomba fiaina tsara kokoa hatrany. Tsy tokony hanadino azy ireo mihitsy isika. Ampiharo ireo izay noresahinay!
Toetran'ny vinaingitra paoma cider
Ny vinaingitra cider Apple dia vokatra tena tsara ho an'ny hatsaran-tarehy sy fahasalamantsika, miaraka amin'ny fananana mahaliana mahasoa ny vatana.
Fomba fanoloana hena
Raha mitady hianatra hanolo ny fihinanana hena ianao, dia holazainay aminao hoe inona avy ireo sakafo tokony harahinao mba hahasalama anao.
Ahoana no tsy hatsembohana intsony, toro-hevitra ary fika
Mety ho olana ny hatsembohana tafahoatra, lazainay aminao ny fitsaboana voajanahary izay azonao atao ao an-trano hialana amin'ny hatsembohana be loatra.
Fahasamihafana eo amin'ny sakafo sy ny otrikaina
Na dia ampiasaina amin'ny fomba mahazatra aza izy ireo indraindray, ny fahasamihafana misy eo amin'ny sakafo sy ny otrikaina dia tena misy. Noho izany, tsy maintsy fantatrao ny marina momba azy roa
Fananana sy tombony azo avy amin'ny oat bran
Oat bran dia vokatra tena mahasalama izay manome fananana be sy tombony lehibe ho an'ny vatantsika raha tafiditra ao anaty sakafo.
Sakafo manankarena tavy ratsy sy tavy mahasalama, mianatra manavaka azy ireo
Mianara manavaka ny tavy tsara sy ny ratsy, dia holazainay aminao ny fomba hanavahana azy ireo sy ny vondron-tsakafo misy azy ireo.
Ratsy ve ny mihinana salady amin'ny alina?
Holazainay aminao ny antony mahatonga ny salady amin'ny sakafo hariva dia tsy mahasalama araka ny nieritreretanao anao, fantaro hoe inona ny toetrany ary inona ny tombony azo entiny aminao.
Salama ve ny atody fotsy fonosina?
Raha liana te hahafantatra bebe kokoa momba ireo fotsy fonosana ianao dia holazainay aminao eto ambany, raha salama izy ireo, inona ny tombontsoa omeny anay sy ny fomba laniny.
Ahoana ny fihinanana sakafo mahasalama
Fantaro ny fomba fihinanana sakafo mahasalama, manaraka dingana vitsivitsy vitsivitsy. Fiovana tsy maintsy ataontsika mba hanatsarana ny fahasalamantsika.
Inona no atao hoe fihinanana sakafo tsy mihinana?
Azo antoka fa efa naheno momba ny sakafo malemy ianao, fantarinao ny ifotoran'izany, ny fomba hanarahanao azy sy ny sakafo avela.
Inona no atao hoe lalan-drà lymphatic?
Ny fitrandrahana lymphatic manual dia fanorana tena mahasoa hitsaboana aorian'ny fandidiana, hanafoanana ny fihazonana ny tsiranoka sy ny poizina, hahafantatra bebe kokoa momba izany.
Ianaro ny fomba hanamaivanana ny fanaintainan'ny bunion
Tsy misy olona afaka amin'ny fijalian'ny bunion, bontsina amin'ny rantsan-tongony lehibe izay mety hiteraka tsy fahazoana aina sy fanaintainana be, holazainay aminao izany.
Ny sakafo mediteraneana dia sakafo tena mahasalama sy mahasoa, ary koa iray amin'ireo sakafo nentim-paharazana eto amin'ny firenentsika.
Tsara ve ny manaratra isan'andro?
Manontany tena izahay raha ratsy ho an'ny hoditra ny fiharatana isan'andro. Betsaka ny olona mahita ny tenany amin'ny toe-javatra aharatra, mamaha ny olanao izahay.
Allergy kanelina: fitsaboana sy soritr'aretina
Fantaro izay ilaina ho fantatra raha tsy mahazaka kanelina ianao sy ny fihetsika tokony hataonao raha sendra misy mahazaka fanehoan-kevitra. Mariho ny torohevitray.
Dite fotsy ho an'ny fihenan-danja
Jereo hoe manampy anao hampihena ny lanjanao ny dite fotsy. Iray amin'ireo zava-pisotro tsara indrindra hanafoanana ny poizina ary hanao veloma an'ireo kilao fanampiny ireo.
Inona no hitranga raha mihinana ronono betsaka aho?
Imbetsaka isika dia liana amin'ny vokatra sakafo manokana, fantaro izay mitranga raha mihinana tononkira betsaka isika mandritra ny vanim-potoana iray.
Nahoana no mahasalama sy mahasoa ny mihinana legioma?
Ny fihinanana legioma isan'andro dia tena mahasoa sy mahasalama ny vatantsika, satria misy mineraly sy vitamina marobe izy ireo.
Ianaro ny fomba fanomanana rano an-tsokosoko hampihena ny lanja
Raha mitady hihena mora foana ianao ary misotro zava-pisotro mahery, aza misalasala manao an'io rano aubergine io, tsotra ary misy valiny tsara.
Fananana sy tombontsoa azo avy amin'ny rano an-dranomasina izay tokony tsy ho tarainao
Raha nandany ny fahavaratra teny amoron-dranomasina ianao dia hahaliana anao ny hahafantatra izay fananana sy tombontsoa azo avy amin'ny ranomasina, fomba tsotra sy mahafinaritra hikarakarana ny tenanao.
Fanafody an-trano ho an'ny mony
Tandremo ny tavanao ary avelao tsy misy mony miaraka amin'ireo fanafody ao an-trano ireo, fitsaboana tsotra sy mahomby. Omano izay tianao indrindra ary jereo ny fiovana.
Mamitaka mihinana miadana ary mameno soa ny tenanao
Izahay dia manambara ny tetika tsara indrindra hihinana miadana ary afaka mahazo tombony maro ho an'ny vatanao sy ho an'ny fahasalamanao.
Manao veloma ny cellulite miaraka amin'ny fitsaboana vava
Lazainay aminao hoe inona no misy ny fitsaboana vongan-tsofina, inona ny tombony omeny antsika ary ny fomba fanatanterahana azy, fomba iray tsy azo idirana amin'ny ady atao amin'ny cellulite.